मृत्युपछि मान्छेको शरिरमा हुन्छ यस्तो अचम्म लाग्दो ७ परिवर्तन... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मृत्युपछि मान्छेको शरिरमा हुन्छ यस्तो अचम्म लाग्दो ७ परिवर्तन…
मान्छेको जन्मसँगै मृत्युपनि जोडिएको हुन्छ । मानिस ज्यूदो हुदाँ गर्ने उसका हरेक क्रियाकलाप मृत्युपछि सून्य बन्छ । मानिस मरिसुकेपछि के हुन्छ ? पुर्नजन्म हुन्छ कि हुदैन ? यस्ता विषयमा निकै चर्चा सुनिन्छ ।
त्यसैले पनि मान्छेको मृत्युपछि शरीर तथा उसको आत्माले के गर्छ भन्ने कुरा भने अझै रहस्यमयी छ । यसमा विज्ञानले समेत कुनै प्रमाण भेट्न सकेको छैन। केही संकेत भने विज्ञानले पनि मान्दछ। मृत्युपछि शरिरमा आउने परिवर्तन भने विज्ञानले तर्क गर्छ सक्छ।
मान्छेको शरीरभित्र के हुन्छ ? मेडिकल रिपोर्ट अनुसार मान्छेको मृत्युपश्चात शरिरमा यस्ता ७ वटा बदलावहरु आउछन् ।
१.मृत्युपछि शरिरभित्र सडेका भागहरुबाट बनेकोे ग्यास आखाबाट बाहिर निस्कन्छ । त्यसैलाई हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा मृतआत्मा आखांबाट बाहिर निस्केको भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
२.पोष्टमार्टमको समयमा मृतशरीरबाट आवाज निस्किन्छ । यसबाहेक शरिरभित्र रहेका ब्याक्टेरियाले ग्यास बनाउंछन् र स्वासप्रश्वास क्षेत्रमा दबाव पर्न जान्छ । जसले गर्दा आवाज बाहिर निस्कन्छ ।
७. चिसो ठाउमा मृत शरिर लामो समयसम्म पनि जस्ता को त्यस्तै रहन्छ । चिसो ठाउमा व्याक्टेरियाको असर नपर्ने हुदा शरिर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ।